Waa waqtiga shaqooyinka xagaaga | Somaliska
Waxaa la joogaa waqtigii ay shirkado badan ay qaadan lahaayeen shaqaalaha xagaaga ayadoo dhaqdhaaqa shaqooyinkaan laga dareemi karo bogga Laanta Shaqaaleynta (Arbetsförmedlingen). Boqolaal shaqo ayaa la soo galiyay oo ku kala fidsan guud ahaan Sweden. Stockholm oo keliya ayaa waxaa ka badnaan in ka badan 250 shaqo oo waqtiga xagaaga ah. Shaqooyinka xagaaga ayaa ah kuwo aad kaga faaideysan karto in aad ka hesho waayo aragnimo shaqo iyo xoogaa jeebkaaga soo gala. Shaqooyinka xagaaga ayaa kala duwan ayadoo shaqooyinka qaar ay u baahanyihiin aqoon iyo xirfad hore halka kuwo badana aysan u baahneyn wax aqoon hore ah. Waqtiga ugu dambeeya ee shaqooyinka xagaaga la dalban karo shirkaha intooda badan waa 15ka April. Shaqooyin badan oo xagaaga ayaa ka banaan kamuunada kala duwan adigoo la xiriiri kara kamuunka aad ku nooshahay iyo gacanyarahaaga Arbetsförmedlingen si aad u dalbato shaqada.
Waxaa la joogaa waqtigii ay shirkado badan ay qaadan lahaayeen shaqaalaha xagaaga ayadoo dhaqdhaaqa shaqooyinkaan laga dareemi karo bogga Laanta Shaqaaleynta (Arbetsförmedlingen). Boqolaal shaqo ayaa la soo galiyay oo ku kala fidsan guud ahaan Sweden.
Stockholm oo keliya ayaa waxaa ka badnaan in ka badan 250 shaqo oo waqtiga xagaaga ah. Shaqooyinka xagaaga ayaa ah kuwo aad kaga faaideysan karto in aad ka hesho waayo aragnimo shaqo iyo xoogaa jeebkaaga soo gala.
Shaqooyinka xagaaga ayaa kala duwan ayadoo shaqooyinka qaar ay u baahanyihiin aqoon iyo xirfad hore halka kuwo badana aysan u baahneyn wax aqoon hore ah. Waqtiga ugu dambeeya ee shaqooyinka xagaaga la dalban karo shirkaha intooda badan waa 15ka April.
Shaqooyin badan oo xagaaga ayaa ka banaan kamuunada kala duwan adigoo la xiriiri kara kamuunka aad ku nooshahay iyo gacanyarahaaga Arbetsförmedlingen si aad u dalbato shaqada.
Safaarada Sweden ee Nairobi oo Somalida ku sii yaraaneyso
abdinaasir bunjabshe says:
asc walaal magaceyga waaniga kor kusoo xusay waxaan deganahay örobro magaalo la dhaho waxay rabay inaan fikir kaga darsado somaliska markas fikirkeygu waxaa weeyan soomali waa isku hal wadan hal dhaqan hal af markaas maxaa keenay marka la yimaado qurbaha in la kale saaro dadka oo ayay dhahaan kanaa keer ah kanaa kaasi ah maxa keenay waxaan leeyahay niman waxaasi wada ee wadan iyo umada soomaliyeed kale soo caya inuu ilaahay naarta jahanabo ka waraabiyo waana kuwo futo dhilif markaas waxaad i idhilhahaasi waxaasi ha la jooojiyo in dadka iyo uma la isku dirin waxaasi waxa keenaya ha iska qabo hadaad rabo topic waxyaabahaas ka hadlaya waan kuu hayaa halkaasi iga soo xidhiidh wsc
Asc : C/naasir sxb haddii aan kula yara kaftamo .
Geelbaa la heesayay , adna Goroyaa ku heestay e ?
Intaa waa iga kaftan , balse si guud waan u fahmay , arinta aad ka hadlayso , balse halkaan hoose shaqada kor ku xusan ayaa looga hadlaayay , adna goroyaa ku heestay , waan kula socdaaa waan uun iska kaftamaa akhi . Arintaad ka dhawaajiday si kale ku xalismi maydo ilaa qof walba oo naga mido aw qalinka ku hadlo !!
Yacni wax qoro , dadkana qalinka wax ku gaarsiiyo .
March 15, 2011 at 13:35
waxaan rajeynayaa in aan ka faa,iidaysano fursada ah sommar jobb dhamaan dhalin yarta oo dhan ha faa,ideysteen
waad idin salaamay dhaman walalaha islaamka gaar ahan somaliyeed
waan ku faraxsanahy fsaxa inaa samarjobb helno waa Alle mahadiisa
teeda kale qof muslim ah ama walalalo islaam ah hadii ee qaldameen ama dhaqanka ka xoog badiyay
qofka wa loo duceeyaa oo Alle inuu xaqa fahansiiyo ayaa Alle loogu baryaa
lkin wax adiga aadan naftaada la jecleen ma lagu inkaaro
wax soo jireen ahaa oo hadane xumaa qaladka ma lahan dadka hada nool ee ku dhaqma lkin awoowayaasheena ayaa lahaa kaliya wanaaga sheeg lkin iska dhaaf qof islaam ah inaa meel aadan naftaada la jecleen la jeclaato sorry in badan
i hate tradion of somalia really for tht
we are muslim and we must to stopp it insha Allh
gör det första ! c,nasir och sen föijer efter dig insha Allh att stoppa den här dåligt tradion
waa loo bahan yahay says:
waa wax aad u wanaagsan waanan jecelahay inaan ka qayb qaato haben iyo dharaar na waan raadiyaa inan mar uun helo somalina waxan kula talin lahaa waaar meesha ka kac oo wadanka ka faaiidaystaa